Sawir kasta - sweeko - Västarvet
Sawir kastaa waxaa uu ka hadlayaa taariikh taas oo fursad inoo siineysa in la socona bulshada iyo sida ay isku bedeshey bulshadu wakhtiyada kala duwan.
Waxaa uu ku saabsanan karaa nolol maalmeed iyo sahqo, waxa ay ku saabsantahay ciyaar iyo wakhtiyad fasaxa la yahay, waxa ay ku saabsantahay xidhiidhka ka dhexeeya dadka - sida sawrika kor ka muuqda ee aabaha iyo wiilka wada jooga. Sawir kastaa waxaa uu ka hadlayaa taariikh taas oo fursad inoo siineysa in la socona bulshada iyo sida ay isku bedeshey bulshadu wakhtiyada kala duwan.
Sawirada lagu soo bandhigayo qolka sugitaanka waxaa uu qayb ka yahay mashruuca Dhaqanka iyo Caafimaadka (projektet Kultur och hälsa); kaas oo ay ka wada shaqeeyeen Västarvet iyo Närhälsan, kaas oo ay ujeedaddiisu tahay in dadka soo booqanya ay helaan qaabilaad qiimo dheeri ah leh.
Footooyinkani waxaa ay qayb ahaan ka yimaadeen ururingta digitaalka ee Västervarvet (Västarvets digitala samlingar), qayb ahaana matxafka Aligsås (Alingsås museum), matxafka Bohuslän (Bohusläns museum), matxafka Tidaholms (Tidaholms museum) iyo matxafka Ulricehamn (Ulricehamns museum)